/Blog/Ithala/Isikhokelo sokuthenga esipheleleyo se2019 sokwakha umzimba we-SARM SR9009
ezaposwa ngomhla 10 / 14 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
SR9009 okanye i-stenabolic sisongezelelo se-CAS 1379686-29-9 esilingisa iziphumo zovavanyo lwe-Cardio. Ayizukuphela ukuba ichiza likuncede unciphise ezinye zeenqatha zomzimba ezigqithisileyo, kodwa liya kukhulisa amandla akho ngelixa lisenza unyamezelo.
I-SR9009 sisiciko esenziwe ngezinto zokwenziwa, esivele sabakho ngenxa yeengcali zikaNjingalwazi uThomas Burris. Inxulumene ngokusondeleyo ne SARMS (I-Androgen Receptor Modulators ezikhethiweyo), kodwa ilusizi ku-Rev-Erbcy iprotheni efumaneka kwimithambo yethambo, izicubu ze-adipose, ubuchopho kunye nesibindi.
Uprofesa Burris weza SR9009 (I-1379686-29-9), inenjongo yokufunda nokuqonda isigqi esijikelezayo.
I-2.Isebenza njani i-SR9009?
Ngaba uyazi ukuba le mvakalelo uyifumanayo emva kokuqhuba i-2km kwi-treadmill okanye ukuphakamisa ezinye i-hardweights? Ewe, i-SR9009 isisindo sokulahlekelwa kwesisindo iya kukwenza uzive ngendlela efanayo. Isongezelelo sinendima ekuguqulweni kwe-circadian, umgaqo we-lipid, kunye nokulawulwa kwamanqanaba eglucose.
I-SR9009 SARM idlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni iRev-Erb. Le proteni ichaphazela amandla omzimba okutshisa amafutha athe kratya, iswekile kunye ne-cholesterol embi. Ke, inyusa inkqubo yokulahleka kwesisindo ngelixa iphucula unyamezelo. Nokuba wenze umthambo, uya kuziva unamandla kwaye udiniwe kangangokuba unokukwazi ukwenza uqeqesho olungaphezulu lomzimba.
I-Stenabolic metabolize fat, lipids, kunye noshukela. Xa ukusetyenziswa kweoyile yomzimba kulungile, ngokungathandabuzekiyo uya kufumana umsebenzi ophezulu. Kwisifundo sokuqala usebenzisa iimodeli zompine, iimpuku ezaziphantsi I-SR9009 powder (I-1379686-30-2) umthamo wawunakho ukuqhuba kabini ngokukhawuleza kunangaphambili. Esi siqwenga sobungqina sinokuba sisizathu sokuba i-stenabolic idweliswe phakathi kweziyobisi ezingavumelekanga kwimidlalo.
Ukuba awunguye maniac wokusebenzela, ezi ndaba zizinto iindlebe zakho ezinqwenela ukuziva. I-Stenabolic iphinda iphindwe kabini inqanaba le-metabolic yakho ngelixa uphumle. Emva kokutya, umzimba wakho uguqula ukutya ube ngamafutha. Nangona kunjalo, i-SR9009 yokuncedisa ukunciphisa umzimba iya kunyusa ngokukhawuleza i-metabolism yokuba uya kuqala ukutshisa la mafutha kwangoko.
Izifundo zamva nje zibonisa ukuba i-stenabolic ngummeli olwa nomhlaza. Umchasi womhlaza we-SR9009 ochaphazela abaqhubi be-oncogenic, kubandakanya i-PIK3CA, HRAS, kunye ne-BRAF. Kwiiseli ezingalunganga, imveliso inchukumisa i-apoptosis kunye nokukhubazeka kwesisu ngaphandle kokudala iziphumo ezibi.
I-3.Indlela yokusebenzisa i-SR9009
Ngaphandle kwelebheli esetyenzisiweyo ye-SR9009 inzuzo yemisipha ichiza, isongezelelo sinemilinganiselo ebalulekileyo yamayeza. Ooklinikhi bancomela kakhulu kubaguli abanesifo seswekile kunye nabo bantu basengozini yokubetha.
Ukuba ucwangcisa ukulawula i-SR9009 powder (1379686-30-2) ngokulawula ukugula kwakho, qiniseka ukuba uthethe nogqirha wakho kwangaphambi kokuba ubenako. Eli chiza likhuselekile, kodwa ugqirha wakho kufuneka akucebise malunga namayeza ngoku ngelixa ujonga naziphi na iimpawu ezibi.
Ukusetyenziswa kwelebheli engekhoyo, idosi eyiqhelekileyo ye-SR9009 imalunga ne-30mg / ngosuku. Idosi yahlulahlulwa kathathu.
Ukuba emva konyamezelo, kuya kufuneka uthathe isongezo ixesha elifutshane ngaphambi kokubetha umthambo. Isizathu kukuba i-SR9009 ine-half-life; ngenxa yoko, iziphumo zibonakalisa kwifleshi. Ngokufanelekileyo, yiphathe ngaphambi kwesidlo ukuze ukwazi ukugcina imetabolism efanelekileyo imini yonke.
I-4.Iimpawu zeSR9009, Ucinga ntoni?
Nyusa ukuthoba umzimba
I-SR9009 SARM iphucula iinkqubo ze-metabolic. Nje ukuba kuthathe indawo yenzeke, i-stenabolic inokuwucwangcisa umzimba ukutshisa iikhalori ezigqithileyo kunokuzitshintsha zibe ngamafutha. Ayisiyo kuphela into yokongeza ukuba kulondolozwe uhlobo lokugcina amafutha, kodwa kunciphisa nokuveliswa kweeseli ezikhulu zamafutha kwisibindi.
Ukuba injongo yakho kukulahlekelwa ngumzimba, qiniseka ukuba ubandakanya imisebenzi yomzimba kwindlela yakho. Ukusebenza ngaphandle, ukutya, kunye nokuthatha i-SR9009 pre yokusebenzela yokunyusa ukukhawulezisa ukutshiswa kwamafutha athe kratya. Uphando lubonisa ukuba ukusebenzisa i-stenabolic kunciphisa amanqatha kunye ne-plasma triglycerides concentration yi-23% kunye ne-12%, ngokulandelanayo.
Kwiimeko ezimanyumnyezi apho ukusebenza okanye ukutya kungasendawo inketho, oogqirha banokukubonelela oku kongezwa.
Ukutshekisha kuhlolo lwabathengi, omnye umsebenzisi uqinisekise ukuba i-SR9009 powder (1379686-30-2) wamnceda ukuba alahle i-17 yeepawundi kwiinyanga ezintathu.
Esi songezelelo asilonyuki kuphela ubunzima bemisipha kodwa siphucula amandla kunye nokusebenza kwaso. Imvakalelo oyifumanayo emva kokuhambisa i-SR9009 dosage ilingana naleyo yesisindo.
Iyeza livuselela ukuveliswa okukhulu kwe-mitochondria ngaphakathi kweeseli zemisipha, ngenxa yoko ukuphakama kwemetabolism. Ezi organelles zinoxanduva lokuvelisa amandla kwizicubu zemisipha. Ngaphandle koko, kuya kubakho ukwanda kokusetyenziswa kweglucose kunye nokutya okunamafutha ngaphakathi kwezihlunu.
Ngokonyango, i-SR9009 izisa izibonelelo zabantu abakhulileyo ngenxa yokuwohloka kwemisipha okanye isarcopenia.
Uninzi lweethambo lomzimba aziyi kuphoswa ukufaka i-SR9009 yokufumana iziyobisi kwirejimeni yazo yokwakha umzimba. Uya kuphakamisa iintsimbi, usebenze ukunyathela, okanye wenze naluphi na umthambo ngaphandle kokuziva udiniwe okanye unombala.
Ngokuqinisekileyo isongezelelo eso siya kuthatha intsebenzo yakho ephezulu kunangaphambili. Ukuba ucinga ukuba ezi zibonelelo ze-SR9009 ibisisikali, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ubuze ukuba kutheni i-arhente yokulwa doping inokuvala ngokuqinisekileyo ukusetyenziswa kwayo kwimidlalo yokhuphiswano.
Njengoko uThomas Burris, umseki weStenabolic, utshilo, ichiza likuguqula ukuba libe yimbaleki enamava ngokupela ixesha. Awuzukuphelelwa amandla okanye amandla xa usenza imithambo eqatha.
Ukuba uhlala unxilile ngexesha losuku, i-stenabolic inokuba lilo iyeza lakho. Kwisifundo sangaphambi kokugqibela, isongezelelo sabonakala ngathi siyiguqula indlela yokulala yeemodeli zokuphamba. Izazinzulu zaphawula ukuba ezi mbeba zaziphapheme ngakumbi ngexesha lasemini, kwaye akukho namnye kubo owayenokulala ubuthongo obunzulu. Ke, ukuba ufuna ukukhaba ungene kwisigqi sakho se-circadian ukuguqula iphethini yakho yokulala, i-SR9009 iya kuyenza ngovuyo.
Ngombulelo wobomi obufutshane be-SR9009-isiqingatha sobomi, isiphumo sokuvuka siya kuba sifutshane. Ke ngoko, awuyi kuba sisidumba semini yonke.
Ukonakaliswa kweTishu (Fibrosis)
Uphando luqinisekisa ukuba iigundane ezinesibindi fibrosis zabuya kwakhona emva kokuthatha i-SR9009 kwiiveki ezimbini.
Ukukhusela kwisifo seNhliziyo
Kwimeko apho intliziyo ikhula ngendlela engaqhelekanga, i-SR9009 powder (1379686-30-2) isebenza ukubuyisela umva i-anomaly ngokunciphisa ubungakanani bezitho kunye nobunzima. Xa ezinye iimpuku zemithambo-luvo elukhuni zanyangwa nge-stenabolic, abaphandi baqaphela ukuncitshiswa kwesilonda semithambo yegazi emva kweeveki ezisixhenxe.
Abanye abasebenzisi bayazi ukuba isongezelelo sidlale indima ephambili ekucutheni uxinzelelo lwegazi labo.
Iyancipha iCholesterol yegazi
Ukuba utyebile, amathuba okuba amanqanaba akho e-cholesterol aphezulu. I-SR9009 iya kunciphisa iye kuthi ga kwi-47% ye-LDL, ngaloo ndlela yenza ukuba ukusebenzisa kwakho kube nemveliso ngakumbi. Kuya kufuneka uqaphele ukuba isongezelelo asichaphazeli amanqanaba e-HDL.
I-Rev-Erbs idlala indima ebalulekileyo ekulawuleni ukuvuvukala kunye nokulimala ngaphakathi kwe-CNS. I-SR9009 ivuselela ii-receptors zenyukliya ze-Rev-Erbcy, ezinemiphumo yokuthintela ukosuleleka.
Isiyobisi siyacinezela ukuveliswa kwee molekyuli ezinokutsha ezinje nge CCL2, MMP-9, kunye ne TNF-α. Njengoko ukulimala kwezicubu kunye nokuvuvukala okungapheliyo kuyimpawu ze-oncogenic, izazinzulu zifunda ngethemba lomdlavuza wesifo somhlaza kwi-SR9009 kwi-oncogene-indened senescence.
I-SR9009 inciphisa uxinzelelo kwiimodeli zeempuku.
Ukuba une-trypanophobia, kukho iindaba ezimnandi kuwe. Ewe, i-SR9009 iyafumaneka kulawulo lomlomo. Akusekho zinaliti zibuhlungu, njengoko kunjalo nangakumbi amachiza atshisa ioyile.
I-5.Half Ubomi be-SR9009
I-SR9009 enesiqingatha sobomi imfutshane njengeyure ezine. Ngesi sizathu, kuya kufuneka uqhekeze umthamo wakho ngamanqanaba iiyure ezine ukuzinzisa i-bioavailability yechiza egazini.
I-6.SR9009 Umthamo kunye nokuKhwela
I-dosage ye-SR9009 i-hinge inokubambelela kwizinto ezimbalwa. Oko kukuthi, yintoni onqwenela ukuyiphumeza nokuba ubandakanya ezinye izongezo kumjikelezo wakho. Ngaphandle koko, isixa esikhutshelweyo sikxhomekeka ekubeni umzimba wakho usabela njani.
Umthamo ophakathi yi-30mg ngemini, onokuthi uyihlule ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Ngokwenyani, lo mayeza uthetha ukuba kufuneka uphathe ipilisi ngaphambi kokuba uthathe nakuphi na ukutya okuziikwere ezintathu. Endaweni yoko, ungasebenzisa isongezelelo emva kweeyure ezine.
Uninzi lwexesha, ukushiya i-SR9009 powder (1379686-30-2) idosi yokusebenza kwangoko inokuba ngumqobo, ngakumbi kubasebenzisi abanomonde. Ngubani onokuthatha iyeza ngamachaphaza iiyure ezine ngaphandle kokwenza ingxabano? Ke, ukuba awukhululeki kolu luhlu lwedosi, ungazimisela ukuyisebenzisa iyure ngaphambi kokwenza umthambo.
Umjikelezo weSR9009 uqhuba phakathi kweeveki ezisibhozo ukuya kwishumi elinambini. Kuba kukho amathemba okuba singanyamezeleki kwichiza, kufanelekile ukuthatha i-8-veki.
Eli chiza alichaphazeli isibindi okanye izintso. Nangona kunjalo, ungawakhusela la malungu ngokufaka ezinye izinto zokongeza ezikhuselekileyo ezinjenge-N2Guard kumjikelezo wakho we-SR9009.
I-7.Ingaba ufuna i-PCT ye-SR9009?
Ngokungafani nezinye izongezo, i-stenabolic ayifuni PCT (Thumela unyango ngoNyango) kuba iyeza alichaphazeli amanqanaba testosterone.
I-8.Iziphumo ezinokubakho ezichaseneyo kunye nomngcipheko wokuSetyenziswa kweSR9009
Iimpawu ezingasentla ziya kuchaphazela kakhulu abaqalayo. Nje ukuba umzimba wakho uguqukele kwisongezo, iimpawu ziya kuphela. Nangona kunjalo, ukuba ngaba yimiphumela emibi ye-SR9009 iba mbi ngakumbi, kuya kufuneka uyilahle kwaye uthethe nogqirha wakho.
I-SR9009 inokwenzeka ukuba ibe mandundu imeko yamadoda ane-libido ephantsi okanye i-erectile dysfunctions. Ngamaxesha athile, isongezelelo sikhokelela kumanqanaba asezantsi e testosterone.
I-Stenabolic ayisiyo Isidakamizwa. Ke ngoko, ukuyithatha akuyi kuphazamisa inkqubo yehomoni. Amanqanaba akho e-testosterone awayi kuyeka, kwaye ichiza alinakufika kwi-estrogen. Kwabafazi, isongezelelo eso asizukuphumela kumjikelo wokuya esikhathini.
I-9.Stacking SR9009 yenye i-SARM
I-SR9009 vs. Ostarine
Kubekwa i-SR9009 nge I-Ostarine (MK-2866) Uya kufumana iziphumo ezizodwa, ngakumbi kwinqanaba lokubuyisela.
I-Ostarine, ngokwayo, yeyona SARM igqwesileyo yomjikelo wokubamba kunye nokusika. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukunyamezela okuphezulu, kuya kufuneka uyiklaze nge-SR9009. Ngexesha lokugcina, qinisekisa ukusebenzisa i-25mg ye-ostarine mihla le. Kwi-stenabolic, i-10mg iyakusebenza, kodwa kuya kufuneka uyithathe xa sele uza kubetha iziko lomzimba.
I-SR9009 vs. GW 501516
I-SR9009 kunye neGW501516 (Cardarine) kufutshane. Olunye uphononongo luze luthi le mixube mibini ibophelela kwii-receptors ezifanayo.
Njengoko sele uyazi, i-stenabolic inesiqingatha sobomi, esingayi kuhlala usuku lonke. Ngokuchaseneyo, i-bioavailability ye-Cardarine ifikelela kwiiyure ze-24. Ukudityaniswa kwezi zibini kuya kukhokelela kwisiphumo se-24 / 7.
Ukuba usebenzisa i-SR9009 ecaleni kwe-GW501516, kuya kufuneka uthathele ingqalelo njengokongezwe ngaphambi kokusebenza. Ukuthetha oku, kuya kufuneka uphathe i-stenabolic kuphela ngeentsuku osebenza ngazo.
Xa ukwindawo yokubeka i-SR9009, umthamo yi-10mg kuphela, ekufuneka uyithathe kancinci ngaphambi kokuba usebenze. Kwi-GW501516, olona xabiso lufanelekileyo yi-20mg / ngosuku, oya kuthi ulawule nesidlo sakusasa sakho.
I-SR9009 yentengiso ikakhulu ijolise kubahlali abakha umzimba emva konyamezelo, ukunyuka kokusebenza komzimba, ukukhawulezisa ngokukhawuleza ukusebenza kunye nokwakha izihlunu ezomeleleyo.
Ukusuka kuvavanyo lweintanethi ezahlukeneyo, abasebenzisi baxela ukuba isongezelelo siphucule unyamezelo njengoko benokwenza imithambo eqatha ngaphandle kokuziva bediniwe. Kwabanye, ukunyuka kwamandla kunye nokunyusa amandla kwakukwinqanaba eliphezulu ngokukhawuleza emva kokuhambisa i-SR9009 powder (1379686-30-2).
Kwicala elingalunganga, abanye abasebenzisi bebengekhe bakhuphe isisu esiqhelekileyo rhoqo emva kweeyure ezine. Nangona kunjalo, abo basebenzisayo i-SR9009 stacks abayifumananga le nto iyinkxalabo kuba bathathe kuphela ukongeza xa besiya ejimini.
Abathengi abambalwa bavumile ukuba i-stenabolic ayibenzi bazive kakhulu. Ngaphandle kokungalali, akukho mntu wabonakala ebhalisa iziphumo ezibi ze-SR9009.
Kukho uqikelelo lokuba i-SR9009 ine-zero bioavailability, ngakumbi kulawulo lomlomo. Nangona kunjalo, ndiyakwazi ukuyiphika le nto ngokuzithemba kuba ukuba isongezo besingafumaneki kwi-bioavava, ke akunakubakho ziphumo ezilungileyo ze-SR9009 emzimbeni womntu.
I-12.Uya kuyithenga phi i-SR9009
Abathengisi abangenakubalwa babeka i-SR9009 yokuthengisa. Nangona iivenkile ezikwi-Intanethi zikwindawo efanelekileyo yokuthenga izongezo, kuya kufuneka ulumke ungaweli lixhoba lemveliso yomgunyathi.
Ukuba ufuna i-stenabolic yamanqanaba oluntu, yifumane kumthengisi onesidima. Unokwenza iodolo nge AASraw.
I-13.SR9009 yokwakha umzimba
I-SR9009 powder (I-1379686-30-2) ityibilike kwimizi-mveliso yokwakha umzimba xa uphando luqinisekisile ukuba isongezelelo senze ukuba iimpuku zinezihlunu ezomeleleyo. Ngaphandle koko, babesebenza ngokubonakalayo, bebonisa ukusebenza kakuhle komzimba, kwaye babenomsindo kunangaphambili.
Abakhi bomzimba abasemva kokuxinana okanye ukusika baya kuxhamla ngokupheleleyo kwi-SR9009. Kwiimeko apho kuye kufuneke ukuba uqeqeshe nzima, ichiza lonyusa izinga lokubetha kwentliziyo yakho, ngaloo ndlela unciphise ukukhanya kunye nokudinwa. Yintoni ngakumbi, i-SR9009 eyongezelelweyo yokwakha umzimba inciphisa ukuvuvukala kunye nomonakalo kwizicubu ukwenzela ukuba inkqubo yokubuyisela ngokukhawuleza.
Isongezelelo sokwakha umzimba se-SR9009 sisebenzela ukuphucula ukusebenza. Ubuncinci, kukho uvavanyo olwaneleyo lokumisela le nyaniso kunye nokuphononongwa komsebenzisi okuqinisekileyo kwemveliso.
Nangona kunjalo, ukusebenza kweli chiza sele kuyithambo lengxabano phakathi koososayensi kunye nabaphandi kunye nabenzululwazi ngokubanzi. Umzekelo, kuye kwakho ii-anecdotes zokuba i-SR9009 yomlomo we-bioavailability yi-zero. Ewe, andinqweneli ukwenza into yommeli kaMtyholi, kodwa i-95% yabasebenzisi be-stenabolic baqinisekisa ukusebenza kwayo. Ngaphandle koko, kuya kufuneka ukuba ubuze ukuba kutheni imibutho yokulwa doping inokuba nerve yokuthintela ukusetyenziswa kwayo kwimidlalo xa into ingasebenzi.
Qaphela ukuba iziphumo ze-SR9009 zibakho xa usebenza rhoqo ngelixa usenza ukutya okusempilweni. Kulumkele ukutya okunamafutha, iikhalori, kunye nokucekeceke ekutshayeni nasekuseleni.
Cho, H., Zhao, X. et al. (2012). Ukulawulwa kokuziphatha ngokujikeleza kwe-Circadian kunye neMetabolism ye-REV-ERBα kunye ne-REV-ERBβ. I-Gene Expression Laborator, iSalk Institute yezifundo zebhayoloji.
IMorioka, N., Zhang, FF, Tomori, M., Hisaoka-Nakashima, K., Saeki, M., kunye noNakata, Y. (2016). Ukuvuselela i-NVNRB ye-Receptor ye-Nuclear ilawula i-Tumor Necrosis Factor-Ekwabonisa ukuHanjiswa kweeMolekyuli kwi-C6 Iiseli ze-Astroglial.
Amakhaya, i-PG, iBrandon-Warner, i-E, et al. (2016). I-Rev-Erb Agonist kunye ne-TGF-β Ngokunjalo zichaphazela i-Autophagy kodwa ngokungafaniyo kulawula i-Hepatic Stellate Cell Fibrogenic Phenotype. Int J Biochem Cell Biol.
UDodson, B. (2013). Izixhobo eziMtsha zokulinganisa iziBonelelo eziNzuzo zokuzivocavoca. LezeMpilo kunye neNtlalo.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al. (2013). Uhlaziyo lwe-Erbα Modulates Muskeleal Muscle Oxidative Capacity ngokulawula iMitochondrial Biogeneis kunye ne-Autophagy. Ijenali yoNyango lweNdalo.
USulli, G., Rommel, A., et al. (2018). I-activation ye-Pharmacological ye-REV-ERB yi-Lethal in Cancer kunye ne-Oncogene-Indosed Senescence. Indalo (Ijenali yangaphakathi yeSayensi).
Iimbono ezixhaphakileyo kwihlabathi le-anabolic steroids	Yonke into malunga ne-Oxandrolone (Anavar), kuya kufuneka uyazi